बाढीपीडितलाई कर्मचारीहरुको सहयोग
सोमबार, श्रावन ३०, २०७४ साल
नेपालगन्ज, साउन ३० । बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका वडा नम्बर ४ र ५ कम्दीका बाढीपीडितलाई निजामती कर्मचारीहरुका तर्फबाट प्रारम्भिक राहत बितरण गरिएको छ । आधिकारिक ट्रेड युनियनको नेतृत्वमा कर्मचारीहरुले सोमबार राहत बितरण..
बाढी प्रभावितमाझ वडा अध्यक्ष तिलकवीर
नेपालगन्ज, साउन ३० । अबिरल बर्षाका कारण बाँकेका अधिकाँश भाग डुबानमा परेका छन् । कम प्रभावित क्षेत्रमा पनि कतिपय परिवारको बिचल्ली भएको छ । यस्तो अवस्थामा कतिपय स्थानमा जनप्रतिनिधीहरु नै..
बाढीबाट ६ हजार ७४७ परिवार प्रभावित
नेपालगन्ज, साउन ३० । बाँकेमा बाढीबाट करिब सात हजार घरमा क्षति पुगेको प्रारम्भिक तथ्यांक जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले सार्वजनिक गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका प्रशासकीय अधिकृत खगेन्द्र पौडेलका..
बाढीबाट २० हजार प्रभावित, राजमार्ग ठप्प
आईतवार, श्रावन २९, २०७४ साल
नेपालगन्ज साउन २९ गते । बाँकेमा पुर्व पशिचम राजमार्ग र हुलाकी सडक दोस्रो दिनपनि ठप्प छन् । बाढीले भत्काएको पुर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत अगैया नजिकैको गन्धैली पुलमा तयार पारिएको डार्ईभर्सन फेरी..
बाढीपीडितलाई खजुरा गाउँपालिकाको सहयोग
नेपालगन्ज, साउन २९ । बाँकेको खजुरा गाउँपालिका वडा नम्बर ६ गिजराका बाढिपीडितलाई आइतबार राहत बितरण गरिएको छ । खजुरा गाउँपालिकाले बाढीपीडित ८५ घरपरिवारलाई राहत सामाग्री बितरण गरेको हो । खजुरा गाउँपालिका..
बाढी क्षेत्रको निरिक्षणका लागि गृहमन्त्री आउँदै
नेपालगन्ज, साउन २९ । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा भईरहहेको उद्दार र राहतका बिषयमा जानकारी लिन गृृहमन्त्री जनार्दन शर्मा नेतृत्वको गृह मन्त्रालयको टोली आइतबार नेपाालगन्ज आउने भएको छ । टोली केही समयपछि..
बाढीले बाँकेमा कहाँ के क्षति भयो ?
शनिबार, श्रावन २८, २०७४ साल
नेपाालगन्ज, साउन २८ गते । शुक्रबाररातीदेखि परेको अबिरल बर्षापछि आएको बाढीले बाँकेमा धनजनकोे क्षति भएको छ । बाढीले हजारौं घरहरु डुबाएको छ । मानिसहरुर अहिले पनि घरको छत र उच्च..
बाँकेमा ४ को मृत्यु, १ बेपत्ता
नेपालगन्ज, साउन २८ । अबिरल बर्षापछि आएको बाढीले घर भत्किदा बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका ४ लालापुरमा एकैघरका तीनजना बालिकाको ज्यान गएको छ । कमिलाल थारुका १२, ९ र ७ बर्षका..
हेलिकप्टरबाट उद्धार गरिदैं
नेपालगन्ज, साउन २८ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले राप्ती नदी किनारमा बसोबास गर्ने बासिन्दालार्ई उच्च सतर्कता अपनाउन, उच्च तथा सुरक्षित स्थानमा जान आग्रह गरेको छ । पानीको बहाव खतराको संकेत भन्दा..
राप्तीको पानी फत्तेपुरमा पस्यो
नेपालगन्ज, साउन २८ । बाँकेमा राप्तीनदीमा पानीको सतह खतराको संकेत पार गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका प्रशासकीय अधिकृत खगेन्द्र पोेडेलका अनुसार कुसुमस्थित जलमापन केन्द्रमा पानीको सतह ८.५७ मिटर..
थारु पत्रकारले दिए थारु जनप्रतिनिधीलाई बधाई
शुक्रबार, श्रावन २७, २०७४ साल
नेपालगन्ज, साउन २७ । थारु पत्रकार संघ बाँकेले स्थानीय तहकोे निर्वाचनमा विजयी थारु समुदायका जनप्रतिनिधीहरुलाई सम्मान गरेको छ । संघका अध्यक्ष बिमला चौधरीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा राप्ती सोेनारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष..
शान्ति सुरक्षाका लागि बाँकेका एसपी तामाङको आत्मबिश्वास
नेपालगन्ज, साउन २७ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक टेकबहादुर तामाङले जिल्लाबासीले महशुस गर्ने गरी जिल्लामा सुरक्षा व्यवस्था मिलाईने बताएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेको प्रमुखमा सरुवा..
बाँके जिससमा निर्वाचित टोली
बिहीवार, श्रावन २६, २०७४ साल
नेपालगन्ज, साउन २६ । जिल्ला समन्वय समिति बाँकेको नव निर्वाचित समितिले कार्यभार सम्हालेको छ । प्रमुख अजय श्रीवास्तव, उपप्रमुख ज्ञानेन्द्र चोधरी लगायत सदस्यहरुकोे बिहिवार सपथग्रहण तथा पदभार ग्रहण भएको हो..
स्वास्थ्य चौकीलाई युनेस्कोको सहयोग
नेपालगन्ज, २६ साउन । बाँकेका दुईवटा स्वास्थ्य चौकीलाई सोलार बत्ती उपकरण उपलव्ध गराइएको छ । बाँके युनेस्कोद्धारा संचालित मातृ शिशु, नवजात शिशु र बालस्वास्थ्य परियोजना अन्तर्गत सोलार बत्ती उपलब्ध गराइएको..
एसपी तामाङको भव्य स्वागत
बुद्धबार, श्रावन २५, २०७४ साल
नेपालगन्ज, साउन २५ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रमुख टेकबहादुर तामाङले बुधबारदेखि जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रमुख टेकप्रसाद राईको बिशेष व्यूरोमा सरुवा भएपछि अख्तियारमा कार्यरत प्रहरी..
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निरीक्षणमा सिचाईमन्त्री गौतम
मंगलवार, श्रावन २४, २०७४ साल
बाँके, २४ साउन । सिचाईमन्त्री सञ्जयकुमार गौतम राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निरीक्षण गर्ने क्रममा सोमवार सांझ बहुचर्चित भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना निरीक्षण गरेका छन् । मन्त्री गौतमले कैलालीको चिसापानीस्थित रानीजमरा सिचाई..
जनप्रतिनिधीलाई शासन संचालनको अभिमुखिकरण
शनिबार, श्रावन २१, २०७४ साल
नेपालगन्ज, साउन २१ । बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई स्थानीय शासन संचालन र व्यवस्थापन सम्बन्धि अभिमुखिकरण दिइएको छ । खजुरा गाउँपालिकाको आयोजनामा भएको अभिमुखिकरणमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य..
जानेबेलामा एसपी राईले भने,–आई मिस बाँके
नेपालगन्ज, साउन २१ – जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेको प्रमुखका रुपमा १८ महिना बिताएर विशेष व्यूरोमा सरुवा भएका प्रहरी उपरीक्षक टेकप्रसाद राईले बाँके जिल्लालाई सधै मिस गरिरहने बताएका छन् । प्रहरी प्रमुखको..
बर्षापछि कतै हर्ष, कतै बाढी
नेपालगन्ज, साउन २० । बिहिवारदेखिको अबिरल बर्षाका कारण बाँकेमा अधिकाँश स्थान जलमग्न भएका छन् । निरन्तरको बर्षाका कारण चुरेक्षेत्रमा मुहान भएका खोलानालामा बाढी आएको छ । बाढीका कारण पेडारी नालाको..
श्रेष्ठलाई विद्यावारिधी उपाधी
नेपालगन्ज, साउन १७ । नेपालगन्जमा लामो समयसम्म पत्रकारितामा सम्वद्ध मुना श्रेष्ठले विद्यावारिधी गरेकी छन् । महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस नेपालगन्ज अंग्रेजी विभागका उपप्राध्यापक श्रेष्ठले भारतको केएन मोदी विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधी(पिएचडी) पुरा गरेकी..
गाउँपालिकाले मागेपछि खजुरामा प्रेस संचालनको तयारी
सोमबार, श्रावन १६, २०७४ साल
नेपालगन्ज, साउन १६ गते । बाँकेको खजुरामा जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रले प्रादेशिक प्रेस स्थापनाका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ । गाउँपालिकाले कार्यालय संचालनका लागि भवन माग गरेपछि जनक शिक्षाले प्रेस..
बर्माले गरे महासंघलाई कम्प्युटर सहयोग
मंगलवार, श्रावन १०, २०७४ साल
नेपालगन्ज, साउन १० । नेपाल पत्रकार महासंघ बाँके शाखाको भवन निर्माणका लागि पटक–पटक सहयोग गर्दै आएका समाजसेवी माधवराम बर्माले महासंघलाई पुन सहयोग गरेका छन् । महासंघले पत्रकारहरुका लागि स्थापना गरेको..
बाँकेको फत्तेपुरमा बृक्षारोपण
नेपालगन्ज, साउन १० । बाँकेको राप्ती–सोनारी गाउँपालिका साविक फत्तेपुर गाविसको भेलुनियामा मंगलबार बृक्षारोपण गरिएको छ । युवा तथा महिला समुहको स्थानीय भगवती सामुदायीक बन उपभोक्ता समितिको बन क्षेत्रमा बृक्षारोपण कार्यक्रम..
पाँच करोड ठगीको अभियोगमा महिला पक्राउ
बाँके साउन ८ गते । बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका ८ का सामान्य आर्थिक अवस्था भएकी एक महिला ५ करोड रुपिया बढि ठगिको आरोपमा पक्राउ परेकी छन् । बढि ब्याज पाईने..
नेपालगन्जमा पुल भाँस्सियो
नेपालगन्ज, साउन ७ । बाँकेको जानकी गाउँपालिकालाई नेपाालगन्जसँग जोड्ने मुख्यमार्गमा रहेको दोदरा नालाकोे पुल भत्किएको छ । मालबाहक ट्याक्टर जानकी गाउँपालिका ३ मा रहेको करमोहनास्थित दोेदरा नालाको पुल भएर सडक पार गर्नेक्रममा..
बसपार्क सडक किन साँघुरो ?
बाँके, साउन ७ – नेपालगन्जको अत्याधुनिक बसपार्क रोडको निर्माण कार्य सन्तोष जनक नरहेको स्थानीयले बताएका छन् । नेपालगन्जको अत्याधुनिक बसपार्क बनिरहदा बसपार्क जानेबाटोमा स्थानीयको चित्त बुझ्न सकेको छैन् । २५ करोडको..
पत्रकार महासंघको मिसन टोली नेपालगन्जमा
नेपालगन्ज साउन ७ गते । नेपाल पत्रकार महासङ्घले खटाएको केन्द्रीय मिसन टोली नेपालगन्ज पुगेको छ । नेपाल पत्रकार महासङ्घका पुर्ब केन्द्रीय अध्यक्ष डा. सुरेश आचार्य नेतृत्वको टोलीमा पत्रकार महासङ्घका उपाध्यक्ष..
बाँके र बर्दियामा दुई हजार ५० घरको निर्माण सुरु
शुक्रबार, श्रावन ६, २०७४ साल
बाँके, साउन ६ गते । जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत बाँके र बर्दिया जिल्लामा दुईहजार ५० घर निर्माण कार्य सुरु भएको छ । सुरुमा मन्त्रालयबाट करिब १३ करोड रुपिया अख्तियारी प्राप्त भएकोमा जनताको..
उपप्रमुख थापालाई सम्मान
बिहीवार, श्रावन ५, २०७४ साल
नेपालगन्ज, साउन ५ । नेपालगन्ज उप–महानगरपालिकाकी नव निर्वाचित उपप्रमुख उमा थापा मगरलाई बिहिबार नेपालगन्जमा सम्मान गरिएको छ । क्रियाशिल पत्रकार महिला(डब्लुडब्लुजे) बाँकेले उपप्रमुख मगरलाई सम्मान गरेको छ । थापा मगर डब्लुडब्लुजेका..
जनप्रतिनिधिलाई अवधी पत्रकारको सम्मान
नेपालगन्ज, ५ साउन । अवधी पत्रकार संघ नेपाल केन्द्रीय समिति नेपालगन्जले बिहिवार नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधीहरुलाई बधाई तथा सम्मान गरेको छ । कार्यक्रममा नेपालगन्जका नवनिर्वाचित उपमेयर उमा थापा मगरले नगरको समग्र विकासका लागि..
Results 1369: You are at page 43 of 46